Masjidul Quba Holland oo lagu wareejiyay Soomalida
Home Diaspora Masjidul Quba Holland oo lagu wareejiyay Soomalida Sawiro
Masjidul Quba Holland oo lagu wareejiyay Soomalida Sawiro
Holland:Waxaa mahad oo dhan u sugnaatay Allaah (Subxanahu watacaalaa) noosahlay in laga hirgaliyo wadanka Holland masaajidkii ugu weynaa ee Soomaaliyeelato.
Masjid Quba ayaa laga hiirgelinayay caasimada dalka Holland ee Amsterdam. Mushtamaca Soomaaliyeed ee ku nool Holland ayaa in badan isha ku hayeeen dhismaha masaajidkan.
Markale waxaan ugu bishaareyneynaa umada Soomaaliyeedee kunool Holland iyo dunida inteeda kaleba in masaajidka uu soo galey gacanteena.
Waxaan mahadaan la soo koobi Karin u celineynaa walaalihii suurto galiyey bacda fadlilaah, Isla markaas waxaan walaalaha kheyrka jecel la socodsiineynaa in uu milkiilaha nagul eeyahey qeybka mid ah qarashkii aan ku iibsaney masjidka, waxuuna nooqabtey mudo kooban.
Masjid Quba waxaa u istaageen walaalo Soomaaliyeed si loo daboolobaahida diineed ee umada,walaalaha waxey la tashteen culumada Soomaaliyeed oo uu kamidyahey Sh. Suldaan Gasle, ahnamasuulkamasaajidka.
Shalay oo taariikhduey ku beegneyd 13/12/2012 Khamiis ayuu dhacay caqdigii lagula wareegey furaha masjid Quba ilaaheymahadii
Daawo sawirada Howsha heshiiska kala wareejinta iyo Qaabka u dhacay